प्रहरीलाई नै थुनेपछि ! यसरी हामफाले... - Tulsipur Online
प्रहरीलाई नै थुनेपछि ! यसरी हामफाले…
Posted by Admin | ११ भाद्र २०७६, बुधबार १९:०८ |
११-भदौ / राप्ती स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपती डा. संगिता भण्डारीले प्रतिष्ठानलाई चलायमान बनाउन नसकेको र जनभावना बिपरित कार्य गरेको भन्दै यती बेला राजिनामा माग हुदै आएको छ ।
विरामीहरुले उपचार पाएका छैनन्, भएका सेवाहरु कटौती भएको छ भने उपचार निकै महंगो हुदा विरामीहरुले थप सास्ती पाएका छन् । सुरुमा प्रतिष्ठानले गति लिन नसक्दा दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुसालको संयोजकत्वमा सरोकार समिति गठन भयो ।
केही दवाव सृजना पनि ग-यो अन्तत संयोजकलाई उपकुलपतीले प्रतिष्ठानको सिनेट सभाका लागि सदस्यमा मनोनयन गरे । त्यस पनि सरोकार समिति चुप भयो । केही दिन नागरिक समाजले चासो राख्यो । त्यसका संयोजक चन्द्रराज पन्तलाई पनि सिनेटको सदस्य बनाईदिए । नागरिक समाज पनि मौन ।
चौतर्फी दवाव पछि पछिल्लो समय सरोकार समिति र नागरिक समाज भने फेरी केही बोल्ने आँट गरेको छ । तर प्रतिष्ठान दिन प्रतिदिन धरासायी अबस्थामा गयो । गर्दा गर्दै २२ जना चिकित्सकहरुले राजिनामा समेत दिए । प्रतिष्ठानले पत्रकारहरुलाई कार्वाहीको माग गर्दै प्रहरी र प्रेस काउन्सीलमा उजुरी दियो । यति मात्रै गरेर प्रतिष्ठानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आनाबस्यक चासो र दवाव दिएको भन्दै कार्वाहीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठायो ।
यो बिचमा विरामीले धेरै सास्ती पाएपछि प्रतिष्ठान बचाऔँ अभियान गठन भएको छ । अधिकारकर्मी विकिरण गौतमको संयोजकत्वमा समिति गठन भयो । यसले उपकुलपतीलाई कार्य क्षमता नभएको र गति दिन नसकेको भन्दै राजिनामा माग ग-यो । तर सुनुवाई भएन । र आज बुधबार प्रतिष्ठानको प्रशासनिक भवनमा ताला लगायो । रजिष्टार रामप्रसाद प्याकुरेललाई कार्यकक्षबाट निकालेर मुल गेटमा ताला लगाए ।
बाहिरी गेटमा ताला लगाउने तयारी भैरहदा वडा प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी पुग्यो । ताला लगाउन अबरोध ग-यो । र केही बेर तानातान र धकेलाधकेल भयो । अन्नत प्रहरीले सकेन । वडा प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरिक्षक शशि शर्मा सहित ४ जना प्रहरीलाई भित्रै थुनेर बाहिरबाट ताला लगाए ।
प्रहरीले हातपात गर्न खोजेपछि भिडले पनि प्रतिकार ग¥यो । भित्रै थुनिएका प्रहरीहरु केही बेर पछि पर्खाल नाँघेर बाहिर आए । अभियानको टोलीले प्रहरीको बिरुद्ध र संगिता भण्डारीको राजिनामा माग्दै नारा लगाए ।
Previousउपकुलपतीको राजिनामा माग्दै प्रतिष्ठानको प्रशासनिक कक्षमा ताला
Nextदुई स्थानमा बिपीको पूर्णकदको शालिक राखिने